ỊKWỤSỊ NKESA ỌRỊA KORO N’ALA-IGBO – DỌKỊNTA LAZ UDE EZE – hoo!haa!!
ỊKWỤSỊ NKESA ỌRỊA KORO N’ALA-IGBO – DỌKỊNTA LAZ UDE EZE
– Dokinta Laz Ude Eze
Igbo ndi ọma ekele m unu. Obi dị m uto nke ukwuu ibido edemede na ogbo nta akụkọ ‘hoohaa.com’. M ga-agba mbọ ka m na-ede edemede a kwa izu uka ọ bụla. Olile anya m bụ na ụmụ afọ Igbo ga-agụ ma tinye kwa ọnụ ha. Igbo kwuru sị na uche bụ akpa, onye ọ bụla nya nke ya. Ka m si eche bụ ka m ga-esi ede.
Unu ahụla ka ọrịa-ozurumba Coronavirus (ọrịa koro) ma ọ bụ Covid-19 jiri jide mba ụwa n’ọrụ? N’Ala-Igbo, ọ bụ godị sọọsọ mmadu abụọ n’Enugwu Steeti ka a hụrụla nje ọrịa a n’ọbara ha. Ndi gọvanọ steeti di iche iche amachie la ụgbọala njem okporo ụzọ ka ha hapụ ịpụ ma ọ bụ ịbata steeti ha. Obodo bụ zi igwe. Ụlọ akwụkwọ akwụsịla, ọrụ akwụsịla, ahịa e mechiela, olee mgbe nke a ga-ebi?
Ihe m chọrọ ịrịọ Ụmụ Igbo ibe m bụ na nje ọrịa-ozurumba Covid-19 nwere ike ịkarị abụọ nke ahụworo. Ma n’ihi na enwebeghi ogige nnyocha nje a n’Ala-Igbo, ụfọdụ mmadụ bu ya nwere ike ị na-ekesa ya na-amaghị ama. Nke a mere na onye ọbụla ga-akpachapụ anya ya rube isi na ntụziaka ụlọ ọrụ Nigeria Centre for Disease Control (NCDC) ka anyi jiri na-egbochi nkesa nje oria a.
Ọzọ di ka ibe ya bụ na ndi ọchịchị steeti and gọọmenti imeobodo (LGA) niile n’Alaigbo kwesịrị iji ugbua kwalite ọnọdụ ụlọ ọgwụ dị iche iche. Ha kwesịrị iwe n’ọrụ ndi dokinta, noosu, medical laboratory scientist na ọtụtụ ndi ọrụ ọzọ na-eme ka ụlọ ọgwụ kwụsie ike. Ndi gọọmenti kwesịrị ime ka ozi mgbochi nje ọrịa a gazuo obodo niile n’Alaigbo. Ha kwesi kwara inye Ụmụ Igbo nkwado pụrụ iche site na inye ha ego na nri ka agụụ hapụ imerụ ụmụ mmadụ ahụ ugbu a ahia niile mechiri emechi. Ndi gọvanọ kwesikwara ị kpọta ndi ọkachamara dị iche iche n’okwu ahụike na mmepe obodo n’Alaigbo ka ha tinye aka mee ka ọrịa a ghara ịghọ ogbunigwe na be anyi.
Ụmụ Igbo ibe m, anyị kwesịrị irubere iwu gọọmenti nyere isi hapụ ọgbakọ ọ bụla ọtụtụ mmadu nọ na ya, jiri ncha na mmiri na-agba agba na-akwọ zi aka anyi oge ọ bụla na ọtụtụ ụzọ mgbochi iche iche. Ka anyị jiri ohere a gwa gọọmenti imeobodo na nke steeti etu anyi chọrọ ka ụlọ ọgwụ dị na obodo anyi di.
Ka anyi na-enyeritara onwe anyi aka ma na egosi kwa ịhụnanya na obi nwanne. Ka anyi niile jiri ofu obi merie ọrịa-ozurumba Covid-19 ka anyi nwee ike ibidokwa azụmahịa na ọrụ bekee anyị dị iche iche.
Igbo bu Igbo, ọ gwụ la ka ọ ha m n’ọnụ na izu a. Ka ọ di ịzụ ụka ọzọ. “Onye aghala nwanne ya”. Ya gaziere Igbo niile.
Dọkịnta Laz Ude Eze bụ onye Ọkpọsị di n’Okpuru Ọchịchị Ọhaọzara nke Ebọnyị Steeti mana o bi n’Abụja bụrụkwa onye ọganihu Ala-Igbo na-echu ụra.
Nkewata edemede NDOZI OBODO bụ ebe ọ ga-anọ na-agwa Ndigbo okwu banyere atụmatụ ndozi obodo (community development), ma ahụike ma agụmakwụkwọ, ma nzụlite ndị ntorobịa, wdg.
Previous Post: ÌGWÈ MMADỤ ETIGBUOLA NWOKE ZERE UZERE, HA CHERE BU ỌRỊA KORO
Next Post: NDOZI OBODO: “ỌNYỊBA” DỌKỊNTA LAZ UDE EZE APỤTALA N’ỌGBỌ